Xiaomi Mi Scale amin'ny fitsapana, mendrika ve izany? | Vaovao IPhone
Xiaomi Mi Scale amin'ny fitsapana, mendrika ve izany?
Miroborobo ny tontolon'ny Internet amin'ny zavatra. Misaotra ny fifandraisana WiFi na Bluetooth, zavatra maro isan'andro izay tsy dia misy ifandraisany amin'ny tontolon'ny teknolojia no mivoatra ary manome antsika fomba vaovao hamaritana sy hamakafaka ny angona.
Hatramin'ny vao tsy ela akory izay, ny refy dia zavatra iray ananan'ny maro amintsika tao amin'ny trano fidiovana ary zara raha manome fampahalalana mihoatra ny lanjantsika, na izany aza, mandeha lavitra kokoa ny vokatra toa ny Xiaomi Mi Scale ary manolotra anay bebe kokoa amin'ny vidiny tena mifaninana izy ireo. Tianay ny Smart Things fa tianay ihany koa fa mora vidy amin'ny paosy izy ireo. Andeha hojerentsika raha mifanaraka ny Xiaomi Mi Scale na tsia
2 Inona no marani-tsaina momba ny Mi Scale?
3 Vidin'ny mizana Xiaomi Mi
Tsy misy dikany firy ny miresaka momba ny tsy fandefasana maripana fa raha fantatrao ny tontolon'ny teknolojia dia ho fantatrao fa matetika i Xiaomi mahazo aingam-panahy amin'ny vokatra Apple. Ny marika Cupertino dia tsy manana vokatra avy amin'ity sehatra ity fa rehefa nahita ny fonosana aho dia tsy afaka ny tsy hitsiky ary manana ny fahatsapako fa mijery ambaratonga noforonin'i Apple aho.
Ny vokatra no zavatra hitanao vantany vao manokatra ny boaty baoritra austere ary tonga milahatra tsy misy kilema miaraka amin'ny plastika miaro mangarahara, amin'ny endrika faran'izay madio amin'ny iPhone, iPad na MacBook aza.
Miaraka amin'ny mizana efa eo am-pelatanany, ny endrika sy ny famaranana dia mampatsiahy ihany koa ny tsipika Apple. Volavola madio, tena mahafinaritra ny maso ary misy fango tsotra "My" izay miavaka eo aminy ambonin'ny vera antonony. Ny Xiaomi Mi Scale dia tsara tarehy, tena tsara tarehy.
Raha mihodina isika ary mijery ny farany ambany, dia hahita a switch izay manova singa Manomboka amin'ny Kg ka hatramin'ny Pounds, tsy haiko hoe inona no toerana misy ny tsirairay, koa fotoana tokony hihodinana mandra-pahitanao ny mety. Ny vokatra dia tsy amin'ny teny Anglisy, farafaharatsiny ilay singa an-tanako.
Farany, mariho fa ity refy ity dia mampiasa totalin'ny bateria AA efatra. Ny rafitra fanokafana ny sarom-baravarana dia azo noforonina tsara kokoa saingy mifanaraka io, tsy hanova bateria isam-bolana koa isika.
Inona no anananao manan-tsaina ny Mizana?
Mety amin'ity fotoana ity ao amin'ilay lahatsoratra ianao mbola tsy mazava ny zavatra ataonay miresaka momba ny refy. Ny tsiambaratelo dia ny Xiaomi Mi Scale manana Bluetooth, amin'ny fomba iray noho ny fampiharana an'ny orinasa, azontsika atao ny mampiasa an'io asa io mba hitazomana ny lanjanay rehefa mandeha ny fotoana.
Ny mizana koa azo ampiasaina ho toy ny fianakaviana, manaiky ny mpikambana tsirairay mandeha ho azy raha vantany vao apetrakao amboniny ny tongotra roa. Amin'izay fotoana izay dia hiseho tsy ho aiza intsony ny efijery fotsy mena ary manamarika ny lanjantsika.
Raha manana ny iPhone amin'ny alàlan'ny Bluetooth isika ary misokatra ny fampiharana Mi Fit, ny refy Hifanaraka amin'ny mombamomba anay ireo angona voatahiry mpampiasa, mba hahitantsika sary an-tsary ny fivoaran'ny lanjantsika, ny habetsahan'ny vatantsika ary raha mahia isika, antonony na be loatra.
Ireo izay mikarakara ny tenany tsy tapaka na tsy maintsy misakafo dia hahita tombony be amin'ity lafiny ity, hisorohana ny fifehezana ny rakitra rehetra. Mazava ho azy, fantatro koa mandrindra amin'ny fampiharana Fahasalamana tafiditra ao amin'ireo kinova farany an'ny iOS.
Mba hanamarihana ny marimarina momba ny refy, raha ny amiko dia nofantsihiko ny soatoavina izay refy nomeko ahy teo aloha. Namaky tranga misy olona nanana olana aho, na isaky ny milanja ny tarehin-tarehin'izy ireo dia mivoaka ny endrika hafa, saingy tsy izany no izy. Efa ho iray volana aho no niaraka taminy ary tonga lafatra izy.
Vidin'ny mizana Xiaomi Mi
Azo antoka fa nahatratra an'io teboka io ianao, maharesy lahatra anao ny refy, saingy mora tohina ianao, nahita vokatra mitovy amin'izany amin'ny fivarotana an-tserasera mihoatra ny 100 euro amin'ny tranga maro. Aza matahotra fa any amin'ny toerana maro ny Xiaomi eo anelanelan'ny 15 euro sy 20 euro, indrindra raha entinao any ivelany izany.
Misy ny fivarotana Espaniôla mivarotra azy nefa mampitombo avo roa heny ny vidiny, zavatra iray mahatonga azy io tsy hahaliana intsony.
Famaranana sy famolavolana
Fifandraisana mifandray amin'ny Bluetooth
Politika fanavaozana ny app Mi Fit
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Xiaomi Mi Scale amin'ny fitsapana, mendrika ve izany?
mpitsara lehibe dia hoy izy:
Tena tsara ny refy, saingy eo amin'io pejy io dia nametraka vidiny fandefasana vola 28 euro izy ireo, namela ilay zavatra 44 sy zavatra euro.
Valiny amin'ny fitsarana
Amin'ny fifanarahana madinidinika dia anananao x € 15,43 tsy misy sarany fandefasana
Miala tsiny, mandoa € 28 izy ireo, amin'ny fotoana hafa nanafatrafatra tamin'ny kely indrindra aho raha tsy nandoa vola.
@alicante_alex dia hoy izy:
Isaky ny nankany amin'ny Tinydeal aho dia naniry ny hampiakatra ahy ny vidin'ny fandefasana azy ireo ary amin'ny farany ny vidiny dia mijanona eo amin'ny 60-70 euro.
Mamaly an'i @alicante_alex
Amin'ireo tranga nolazainao dia angamba tsara kokoa ny mijery fomba hafa. Ny marina dia maimaim-poana ny vidin'ny fandefasana, mazava ho azy fa tsy zakako ny nahazo izany. Jereo amin'ny Internet fa misy kupon na fihenam-bidy indraindray.
Na izany na tsy izany, ao amin'ilay lahatsoratra dia manome hevitra aho fa misy fivarotana sasany any Espana mivarotra azy amin'ny vidiny 30-40 euro, noho izany dia tahirizinao ny fiandrasana sy ny 15-20 andro ilaina hahatongavana.
Aphex dia hoy izy:
Mieritreritra aho fa miditra an-tsehatra ianao ary nisafidy ny fandefasana avy any Espana ianao (2 ka hatramin'ny 3 andro) izay misy vidiny fanampiny amin'ny fandefasana. Raha misafidy ny handefa avy any Shina ianao dia tsy misy vidiny fandefasana.
Valio amin'i Aphex
Ok tsy nilaza na inona na inona aho, efa mahita ny vidin'ny fandefasana entana avy any Shina aho, mampalahelo.
Fanontaniana iray: tsy manome ny firaketana ny isan-jaton'ny tavy, rano, ny taolana, sns? Ireo zavatra lamaody ireo ankehitriny amin'ny sakafo mahavelona tanteraka.
Miarahaba anao ary misaotra tamin'ny fandinihana ity vokatra ity
Salama Roberto, tsy atolotra ireo angona ireo. Eny, marina fa amin'ny farany dia mizana vitamina amin'ny vidiny ambany izy io nefa raha afaka mankafy ireo fiasa nolazainao ireo dia mila mandany vola bebe kokoa ianao. Mi Scale 2 ho avy dia mety hampiditra azy fa amin'izao fotoana izao, voafetra amin'ny lanjan'ny firaketana (sy ny BMI izay manisa azy mifototra amin'ny lanja amin'ny halavantsika).
Iker dia hoy izy:
Misy toerana ve izay mivarotra mora vidy?
Mamaly an'i Iker
Tonga amin'ny haavon'ny hadalana izany, ary ny fiankinan-doha amin'ny milina tsy misy fotony, izay menatra: tsy fantatr'izy ireo intsony izay hamorona azy. Tanteraka tokoa ny zavatra ambara: manimba ny olona ny masinina.
Raha ny fahitana azy dia ny olana amin'ny fandefasana dia maimaim-poana izany raha latsaky ny 2kg ny vokatra. Eto, tsy haiko hoe maninona amin'ny fandefasana fandefasana ao anatin'ny famaritana ny vokatra no misy azy manao hoe "Hongkong Post Air Mail Parcel over Over Weight", izay midika fa tsy maintsy mandoa ianao. Misy ny olona izay ao amin'ny fanehoan-kevitra dia manontany momba izany satria ny lanjany dia 1,9kg.
Izaho koa dia nijery tranonkala hafa ary tamin'ireny rehetra hitako ireny dia mitaky vola be dia be. Toa 2,72kg ny lanjany.
Tsy fantatro ny fomba nahazoan'i Nacho azy raha tsy nandany vola.
Miarahaba ary raha misy mahita dia ampahafantaro azy 😉
Salama Carlos, ny marina dia tsy mazava amiko koa momba izany, mahita ny hevitrao. Nahita ny refy aho, nampiana an-tsoroka ary nandoa PayPal. Mazava fa raha napetrak'izy ireo tamiko ny vidin'ny fandefasana entana dia tsy nalaiko izany fa rehefa nividy mora dia tsy nieritreritra an'izany akory aho. Angamba misy karazana tolotra manokana amin'ny fandefasana entana ary tsy tsapako izany.
Ny lanjany dia milanja azy manokana, mino aho fa ny 2Kg dia mandalo mora foana eo anelanelan'ny boaty misy azy sy ireo fonosana fanampiny napetrak'izy ireo.
iFixit dia nandefa ilay Magic Mouse, Magic Trackpad ary Magic Keyboard vaovao
Tonga tany India sy firenena enina hafa ny iPhone 6s. Tonga any Thailandy sy any amin'ny firenena hafa izy amin'ny 30th